Bocas Town Panama - Luxury Villa Rentals Caribbean | Bocas Bali
Sei Ndakatenga Chitsuwa Blog
Zvakanakisa zveBocas Del Toro Blog
Hutano & Kuchengetedza
Bali Bari In The News
Nzvimbo yeBocas del Toro
Nguva Dzakanaka Dzekushanya
Watadza kuvaka guta rakadai nhasi. Chikamu chemashiripiti chinosanganisira makumi mashanu-pamwe maresitorendi, mahotera, uye mabhawa anotambanuka pamatanda pamusoro peGungwa reCaribbean. The United Fruit Company, aka Chiquita Banana, yakavaka dzakawanda zvezvivakwa zvekolonial 50 pamwe nemakore apfuura. Manheru kunwa cocktail mune imwe yezvivakwa izvi uchiona panga boat taxis zip by hapana chipfupi chekuroya.
Kuenda kunharaunda iyi kuchiri kunzwa sekunakidzwa. Nekudaro, ndege dzakananga dzinosimuka zuva nezuva kubva kuPanama City, Panama, neSan Jose, Costa Rica kuenda kuBocas Town. Iyo 5,000-foot runway, iri kumucheto kweguta, inogara nyore nyore 40-vafambi jets. Kana wangomhara, zviri nyore maminetsi gumi kufamba kuenda kumugwagwa mukuru muBocas Town. Kana Bocas Bali yapedza kuvaka, vashanyi vedu vachatora 10- kusvika 10-maminetsi echikepe kukwira kubva kudhorobha reBocas Town kuenda kuchitsuwa chedu.
Yaimbova nharaunda diki inorara, Bocas del Toro iri kushandura nekukurumidza kubva kune imwe mireniyumu yekushanya kuenda kune imwe yepamusoro yezororo paradhiso-ye-vose. Hauzoshayiwi pekugara nechikafu. TripAdvisor inonyora 244 zvivakwa, zvinosanganisira makumi matatu nemaviri mahotera, 32 "specialty lodging" pekugara, uye 125 B&Bs uye inns. Mitengo inotangira pa $87-$15 usiku. TripAdvisor inonyorawo maresitorendi zana nemakumi maviri nenhatu - hafu yawo inogara muBocas Town, uko mimhanzi inorarama inopa ruzha rwehupenyu hwehusiku hunofadza gore rose.
Kamwe muBocas Town, iwe uchaona zvisingaperi zviitiko. Vechidiki vanobva kumativi ose enyika vanounza simba kuguta, uye kufamba mumugwagwa mukuru kucharatidza zvakasiyana-siyana zvemazera uye madzinza. Downtown Bocas yakaona kuvandudzwa kunoshamisa mumakore mashoma apfuura, asi kwete nekuda kwekunaka kwayo.
Makore makumi maviri kubva zvino vanhu vachati, “Unorangarira kugwinya kweBocas Town mumazuva ekare? Migwagwa yakanga yakazara nevanhu vaduku vanobva kumativi ose enyika; vashanyi vakapfuma vakanga vachangowana nzvimbo yacho, uye waigona kutakura igwa romunzvimbomo kuenda kuchitsuwa chiri pedyo nokuda kwe$5 chete.” Zvinoita sekunge Bocas ari mu "zera regoridhe" kana zvese zviri mugwara.
Bata Bocas Bali
Tarisa boutique yedu
hotera yepamusoro muCosta Rica
Webhusaiti uye kutora mafoto by Laabs Creative
Mitengo inosanganisirwa zvese
Mareti anobva pakugara kwakapetwa kaviri kana kumwechete (hapana kugara katatu kana katatu)
Mitero haina kubatanidzwa kunze kwekunge yacherechedzwa (10% yekamuri uye 7% yezvekudya nezvinwiwa)
Kugara zvishoma kwehusiku huviri, Kugara pasi pehusiku 2 kubva Zvita 4 kusvika Ndira 20
Vakuru chete midziyo, vaenzi vanofanira kunge vaine makore gumi nematanhatu
Hapana mhuka dzinovaraidza dzinobvumirwa
Zvese zvakachengetwa zvinosimbiswa neemail
A 50% dhipoziti inodiwa kuti usimbise kubhuroka. Mari yasara inobhadharwa paCheck-in. Kana iyo dhipoziti isati yapedzwa mukati memavhiki maviri ekuchengetedza, kudzima otomatiki kunoshanda.
Bocas Bali parizvino haibhadharise kudzima kana kuchinja mari. Zvisinei, kana ukaronga kukanzura. Ndapota tizivisei zviri mberi sezvinobvira. Munyaya yekukanzurwa, yako 50% dhipoziti ichadzoserwa mukati memazuva makumi matatu.
Mutemo wenyika yePanamani unorambidza kusvuta munzvimbo dzakajairika, maresitorendi, nemabhawa. Nekunyaradza kwevaenzi, hotera ine mutemo wekusaputa fodya munzvimbo dzakajairika, kusanganisira dziva rekushambira, mabhawa, uye maresitorendi. Vaenzi vanoputa vanofanira kubvunza Reception kana vasvika kunzvimbo dzakatarwa kuti vadaro. Iwe unogona kusvuta pane terrace yeVilla yega yega. Pane $200 yekuchaja yekudzoreredza kamuri kune vanhu vasingatevedze mutemo uyu.
Unoda Rubatsiro Rumwe?
Ndokumbira upe ruzivo rwako uye nemazuva auri kutarisira kugara. Tichakubatai munguva pfupi iri kutevera.
Ndatenda nekufarira kwako muBocas Bali. Ndokumbira upe zita rako, nhamba yefoni, uye email kero uye tichakufonera nekukurumidza.